မင်းသန့် မောင်: Gtalk အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Gtalk အကြောင်း သိကောင်းစရာ
စာရိုက်တဲ့အခါ Font Size ကြီးကြီးမြင်ချင်ရင် Control ကိုဖိထားပြီး
ပိုပြီးထင်ရှားစေချင်တဲ့ စာကြောင်းတွေ၊ စာလုံးတွေကို အနက်ရောင် Bold တင်ချင်ရင် **နှစ်ခုကြားထဲသာ ထည့်ရိုက်ကြည့် အဲဒီ Star နှစ်ခုကြားတည်းကစာလုံးတွေ Bold ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
ထည့်သုံးလို့ရတယ်။ အများကြီး အများကြီးနဲ့ Q အဲမှားလို့ Chat ကြတဲ့သူတွေ Mouse
တစ်ခုစီ ပိတ်ချင်ရင်တော့ Ctrl+F4 ဆိုရပါပြီ။
G-Talk တွေအများကြီး ဖွင့်လို့ရအောင် ဒီလိုလုပ်ပါ။ Desktop ပေါ်မှာ
New Shortcut ယူလိုက်ပါ။ အောက်ပါစာသားတွေရိုက်ထည့်လိုက်
ပါ။ " "များပါထည့် ရိုက်ပါ။ /nomutex ရှေ့တွေ Space ရှိပါတယ်။ "C:\_program
အဲနောက်တစ်မျိုးက အဲဒီ စာသားတွေကို Start ထဲက Run Box
Registery ကနေသွားကြည့်မယ်။ Windows ရဲ့ Registery ထဲက G-Talk ထဲမှာလည်း လုပ်စရာလေးတွေရှိတယ်။ Registery Editor ထဲကို Start ထဲက Run ထဲကနေ
Ggoogle Talk ကဘယ်မှာရှိ လဲဆိုတော့ HKEY_CURRENT_USER\_Software\_
Google\_Google Talk အဲဒီထဲမှာရှိတယ်။ Google Talk ဆိုတဲ့အောက်က Account ဆိုတဲ့အောက်မှာ ဒီG-talkမှာ သုံးသွားသမျှ Account တွေအားလုံးမှတ်ထားတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျန်နေတာပါ။ ဒီမှာ ဘယ်သူတွေ Sign-in ၀င်ခဲ့သလဲဆိုတာ အားလုံးသိရမယ်။ ဒါပေမယ့် ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့
Emotion လေးတွေကို G-talk ကအပြာရောင်လေးတွေနဲ့ပြပေးနိုင်
တယ်။ ခေါင်းလေးကို ဘယ်ဘက်စောင်းလေးကြည့်ရင်တော့ မျက်နှာလေးတွေ ပိုပီပြင်တာပေါ့
G-Mail ရဲ့အထဲက G-talk မှာ Sign Out လုပ်တဲ့ မြှားလေးကို Invisible လို့ပြောင်းလိုက်ရင် ကိုယ့်ကို offline
အနေနဲ့ပဲမြင်ရတော့မယ်နော်။ G-Mail ထဲဝင်ပုန်း နေလို့ G ပုန်းကြီးလို့လဲ ခေါ်ကြတယ်ဗျာ။
အရင်ဆုံးအသုံးဝင်မယ်ထင်တာလေးတွေပြောမယ်။ ကိုယ့်ကို Block လုပ်ထားလား၊
တကယ်လို့ Block လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ information (pics,username)တွေဘာမှမြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Offline လို့ပဲပြလိမ့် မယ်။ သူ့ရဲ့ Information လေးတွေ တွေ့ရပြီဆိုရင်တော့ ဒါကိုယ့်ကို block မလုပ်ထားပါဘူး။ ဒါက online မှာရှိရှိ၊ မရှိရှိ ကြည့်လို့ရ တယ်။
လုပ်ကာသိမ်းထားလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် Resolution က တော့ 96 x 96 ပဲရလိမ့်မယ်။
ဒီ Pidgin ကို Portable အနေနဲ့ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ Memory Stick ထဲမှာသုံးစေချင်တယ်။ သူက Account တွေကိုသိမ်းထားပေးတယ်လေ။ အကယ်၍ မဖျက်ခဲ့မိရင်တောင် ကိုယ့် Drive ထဲမှာဆိုတော့ ပြဿနာမရှိတော့ပါဘူး။ Menu Bar က Accounts ထဲမှာ Manage Account ဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒီထဲမှာ Account တွေအများကြီး သိမ်းထားမလား၊ Password တွေပါပါလား၊ Accounts တွေဖြုတ်မလား
Posted by မင်းသန့် မောင် at 9:13 AM
canadian online casino, καζίνο, CLUBWORLD CASINO, Willhill, Visitor counter
တကယ်တမ်း ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ် တွေကို ရှင်းလင်းရတယ်ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်သလို မိမိရဲ့ အဖိုးတန်တဲ့ အချိန်တစ်ချို့ကိုပေးဆပ်ကြရတ...
short cut key တွေ ဆိုတာက ခရီး လမ်းကြောင်း တခုကို အတိုဆုံး နေရာ ကနေ မြေကြော ရှူံ့ပြီး လိုတဲံ့ နေရာ ရောက်အောင် သွားနို့င်ဖို့...
စာရိုက်တဲ့အခါ Font Size ကြီးကြီးမြင်ချင်ရင် Control ကိုဖိထားပြီး Mouse အလယ်က Scroll Wheel ကိုလှည့်ကြည့်ပါ။ အကြီးအသေးပြောင်း...
လက်ရှိ မိုဘိုင်းဖုန်း နယ်ပယ်မှာတော့ iPhone ဆိုတာ အကြီးမားဆုံး ဂုဏ်ဒြပ်ပါပဲ။ ဘက်ထရီ သက်တမ်းကြာ ရှည်ခံမှု၊ စွဲ...
Linus OS (မြန်မာ) စာအုပ်
ဒီကောင်လေး ကတော့ Linus OS (မြန်မာ)လိုစာအုပ်လေး ဖြစ်ပါတယ်---- သယ်ချင်း တော်တော် များများ လဲ သိ၇ှိ လေ့လာနေကြတဲ့ ကောင်လေး ဖြစ်ပါတ...
ချစ်သူရေ........... မင်းငိုတဲ့အခါ မှီတွယ်ရာ ပုခုံးတစ်စုံ ငါပေးအပ်ချင်ပါတယ်........... တိုင်းပြည်အတွက်လို ဆိုထားပေမဲ့လိုအပ်ရင် ...
"သူပေးတဲ့အမှတ်တရလေးတွေ..............."
ကျနော် သူကို အရမ်းချစ်သည်….။ အချစ်ဆိုတာကို တကယ်တမ်းခံစားတက်တဲ့အရွယ်မဟုတ်သေးတာ သိပေမဲ့ရင်တွေခုန်ခဲ့ တဲ့ အချိန်က မှတ်မှတ်ရရ...
ကွန်ပြူတာ Memory သန့် ရှင်းအောင်လုပ်နည်း
၁။ Desktop ပေါ်မှာ Right-click နိုပ်ပြီး New-Shortcut ကိုထပ်နိုပ်ပါ၊ ၂. Type the location of the item ...
1။ ဂျီတော့ ဘောက်စ့်လေးထဲမှာရှိတဲ့ Forgot your password? ကိုနှိပ်လ်ိုက်ပါ။ 2။ username & email လိပ်စာကိုဖြည့်ပြီး submi...
စည်းကမ်းရှိရှိ ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင်နေ သစ္စာရှိရှိ ရဲ့ ရဲ့ ဝံ၀ံလုပ် ဘ၀တခုကို ပုံဖော်နေတုန်းပါပဲ ခင်ဗျာ
How to speed-up your PC - Clean RAM
New Folder ဆောက်ချင်သူများအတွက်
G-mail ကို Themes အလန်းလေးသုံးကြည့်၇အောင်နော်
Windows ၇ဲ့ Message Text လေးကို Colour လေးတွေပြောင...
connection မကောင်းလျင်သုံးနိုင်သော နည်းများ
Virus ရှိမရှိစစ်ဖို့Security 360
G-talk ကနေ Mail ဖွင့်တဲ့အခါ Mozilla Firefox နဲ့တို...
luxand blind face recongnition pro 2.3
Window7Logo Background Changer
AVG Antivirus 2012 x 64
Microsoft Security Essentials 2.1.1116 Vista / win...
Microsoft Security Essential 2.1.1116 for xp
Kaspersky Security 2012 + serial key
Vedio converter software..ဒေါင်းလိုသူများအတွက်
ENG to Myan Dictionary
Babylon 8 software ခရပ်အပါအ၀င်..
USB သန့် ရှင်းရေးပြုလုပ်ပုံ
mail အကောင့်ဟောင်းမှ သူငယ်ချင်းများကို အကောင့်သစ်သ...
Firefox အတွက် Shortcuts လေးများ
ဖျက်လို့မရတဲ့ ဖိုလ်ဒါ ဆောက်ကြည့်ရအောင်
shut down အလွယ်ချနည်း
Adobe Acrobat (PDF)ကို notepad လိုအမြန်ဖွင့်မယ်.
Add keyboard languages (1)
drive locker (1)
Gmil and facebook (1)
Linus OS (1)
memory clean (1)
Nod 32 Update Keys (1)
Shell gtalk (1)
Window7Logo Background (1)
WinRAR 4.11 (32bit) and (64bit) (1)
တရားများ Download ချလိုလျင်
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကောင်းတစ်ယောက် စာအုပ် ဒေါင်းရန်
၂၄ နာရီ တရားများ လွင့်တင်ထားသော
စာပေဝါသနာ ရှင်များ အတွက်
မြန်မာ့ အွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်း
ကိုရီးယား အရူးများ အတွက် :P
gmail ပုံစံလှလှလေး သုံးချင်သူများအတွက် ဒီမှာ ဒေါင်းပါ
pdf ဖိုင် ပြောင်းချင်ရင် ဒီမှာ လာပြောင်း
ဘောလုံး ဝါသနာအိုး များ အတွက်ပါ
Goal Score ကြည့်ရန်
Myp2p ( sopcast ဒေါင်းပြိး ကြည့်ပါ )
premierhighlight အတိုပဲ ကြည့်ချင်သူများ အတွက်
Jurnal & Magazine